Toliary: tohin'ny raharaha
2007-04-27 @ 16:29 in Politika
Nalaza moa ny andron’ny alakamisy ny fisian’ny rotaka tany Toliary. Fihetsiketsehana nataon’ny mpianatra noho ny tsy fisian’ny jiro no antony voalohany. Nitokona ry zareo tamin’ny fiandohan’ny herinandro teo. Nanao fampiraharahana ny solotenan’ny mpianatra sy ny solontenam-panjakana. Ny vokatra avy tao dia mahazo jiro ny Oniversite ny maraina amin’ny 6 – 8 ora, ny atoandro amin’ny 12 – 2 ora mba ahafahana mikarakara sakafo ary ny hariva amin’ny 6 – 11 ahafahana mianatra alina ihany koa. Nahafa-po ny mpianatra izay marimaritra iraisana izay.
Dia niteny indray ary ny tompon’andraikitra nifampiraharaha fa tsy tokony hisy intsony ny fidinana an-dalam-be. Tsy namaly teo noho eo ny mpianatra fa rehefa nanao tatitra no nilaza fa tsy maintsy asiana foana ny filaharana (hitakiana inona moa ?). Ren’ny tompon’andraikitra izay teny izay ka nomarihiny fa tsy maintsy aparitany raha mbola misy mitady hihetsiketsika tsy amin’ny antony eo. Tsy niraharaha ny mpianatra ary efa nivonona ihany koa ny tompon’andraikitra ao amin’ny farintany.
Tonga tokoa ny andron’ny alakamisy, niantsoantso namory ny mpianatra indray ny mpitarika. Teo indrindra no nakan’ny miaramila ireo mpitarika ny tolona efatra ren’ny mpanara-baovao voalohany. Tezitra noho ireo fihetsika ireo ny mpianatra sy ny tsy mpianatra ka nirohotra nankeny amin’ny sampan-draharaha misahana ny fonja. Tena fanafihana ara-bakinteny no natao fa tsy fitokonana teo anoloan’ny trano. Izany no nahazoan-dry zareo ho babo ny lehiben’ny fonja sy ireo mpiasan’ny fonja anankiroa. Atao hoe voafehin-dry zareo ny sampan-draharahan’ny fonja hitakiana ny famoahana ireo namany heveriny avy hatrany fa ao am-ponja ( fa angaha moa tsy any amin’ny kaomisaria aloha ?).
Nandray andraikitra noho ny zava-miseho ny tompon’andraikitry ny fandriampahalemana. Velona tao anatin’izany ny fifandonana. Ny « mpianatra » dia vato no fitaovam-piadiana ary ny miaramila kosa dia kobay sy ny entona mandatsa-dranomaso (miisa 20 hoy ny ankamaroan’ny fampahalalam-baovao). Nodoran’ny mpianatra ny trano fiasana sy ny fiaran’ny lehiben’ny fonja ary nentiny ho any amin’ny cité-n’ny Oniversite ireo babony tao amin’ny sampandraharahan’ny fonja. Tamin’io fifandonana io no namparatra ireo mpifanandrina sy nahasamborana olona sivily 8 ( izany hoe tsy mpianatra araka ny fahazoan’ny mpihaino azy fa olona ivelan’ny oniversite mihitsy nefa dia tao anatin’ny tolon’ny mpianatra).
Noesorina ny fahafahan’ny oniversite satria miafina ao ny « mpaka an-keriny ». Karohina ao ny lehiben’ny fonja izay nalain’ny mpianatra araka ny fitantarana teo ambony. Azo hevitreverina avy hatrany ny « antsojay » tsy maintsy ho misy any anatiny any. Samy tadiavin’ny tompon’andraikitra manko na ny natao takalon’aina na ny tena atidohan’ny mpanao ankeriny. Marihina fa ny any Toliary hatramin’izao no tena mahasahy manafika biraom-panjakana tahaka izao teto Madagasikara hatramin’ny nahaary saina ahy. Tamin’ny taona 1971 manko ny fitokonana notarihin’Atoa Monja Jaona dia nifototra tamin’ny fanafihana ny tobin’ny Zandary rehetra hitany tamin’ny alalan’ny pilotra sy ny lefona fa tsy toy ny filaharana fanaon’ny olona amin’ny ankapobeny. Dia karazandrazany ihany koa izao tantaraina amintsika izao.
Ahoana ary ny tohiny ?
Araka ny vaovao faramparany re ary dia navotsotra ihany ireo babon’ny mpianatra tamin’ny 4 ora maraina teo. Tsy nolazaina kosa raha navotsotra tahaka izany na tsia ireo lehiben’ny fitokonan’ny mpianatra. Ny Senatera Robert Razaka sy ny Depiote Limby Benaria indray no nitarika ny filaharambe nataon’ny « vahoaka » androany maraina ary mifototra hatrany amin’ny fanoherana ny delestazy sy ny fiakaran’ny vidim-piainana indrindra ny tsy fisian’ny arina izany filaharana izany. Nentanina tamin’ny alalan’ny trakitra tsy nisy sonia moa izany ary namporisihina ny vahoaka hitondra sotro sy vilia hampanenoana.
Vetivety teo dia nivadika fandrobana ny entan’ny mpivarotra nandalovan’ny zareo izany filaharana izany ary nisy ihany koa ny fanafihana tsena handrobana ny entan’ny mpivarotra rehetra tao an-tsena ( dia tena tsy tadidiko ry zareo ny anaran’ilay tsena !). Efa tsy fitokonana intsony indray izany fihetsehana izany fa efa fandrobana ka niditra an-tsehatra indray ny mpitandro ny filaminana nandrava, nanenjika ary nanao tifi-danitra mihitsy aza araka ny heno ( ka tsy misy mahita tsinona fa araka ny tatitra avy amin’ny vaovao ihany no tantaraina eto). Efa rava tanteraka ny fitokonana tamin’ny 12 sy sasany atoandro fa ny taorian’izay kosa dia tsy mbola fantatra ny tohiny.
Mavitrika dia mavitrika Atoa Tarcisius Raherinandrasana solontenan’ny Radio Nasionaly Malagasy any Toliary ka voalohan-daharana avy hatrany amin’ny radiom-panjakana sy ny televizionam-panajakana ity raharaha ity. Ny tsy miankina aza dia tsy mahraka ny vaovao avoakany amin’ny ankapobeny. Tsy tahaka ny taloha hoe afenimpenina ity raharaha ity fa tena tantarainy hatramin’ny antsipiriany sy hitondrany ny feon’ny tompon’andrikitra mihitsy aza. Ny an’ny mpanohitra kosa aloha tsy entiny e ! iny indray dia any amin’ny Radio Don Bosco no ahafahana mihaino izay lazainy.